June 16, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ श्रम परे पनि लगनशीलताले विशेष उपलब्धि दिलाउनेछ। भविष्यका लागि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। पुरुषार्थी काम गर्दै लाभ उठाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा उपलब्धिको स्रोत…
June 11, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ प्रतिस्पर्धिहरुलार्ई हराउँदै निर्यायक तहमा पुगिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँको पक्षमा आउँने हुनाले मन प्रसन्न हुनेछ । पुराना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या भए समाधान भएर जानेछ । ऋण तथा संकटबाट छुटकारा पाउँने समय रहेकोछ…
तपाइको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस आजको तपाइको राशिफल
May 28, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ बिहानको समय उत्तम रहेकोले पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सकिनेछ भने चाहेका उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकिनेछ । समयको सहि सदुपयोग गरि विदेशि लगानीहरु ल्याई रोजगारका अवसरहरु बढाउन सकिनेछ । कर्म प्राप्तिको लागि…
तपाइको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस आजको तपाइको भबिस्यबाणि
May 27, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आउने आम्दानिले उत्साह जगाउनेछ । पानी तथा खनिज पदार्थको व्यावसायबाट मोटो रकम हात लागि हुने योग रहेकोछ । प्राकृतिक स्रोत तथा पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग गरि मनग्गे धन…
May 26, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ परिश्रम गरेअनुशार प्रतिफल प्राप्त नहुने हुनाले काम गर्न मन लाग्ने छैन । अरुकै लहैलहैमा लाग्नाले पढाइ लेखाइमा भनेजस्तो नतिजा आउने छैन भने प्रतिष्पर्धिहरु हावि हुनेछन् । व्यापारमा प्रशस्त समय दिएपनि भनेजस्तो आम्दानी…
आजको तपाइको दिन कस्तो छ ? आज शनिबारको हेर्नुस राशिफल
May 25, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ नयाँ काम पाउने तथा नोकरिमा बढुवाको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरि मनग्गे आम्दानीगर्न सकिनेछ भने नया प्रकृतिको काम गर्ने बाताबरण बन्नेछ । पढाइ लखाईमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ…
तपाइको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस आजको तपाइको राशिफल…
May 24, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ गीतसंगित क्षेत्रमा रुचि बढ्ने हुदा केहिसमय रमाईलोतिर पनि समय खर्च हुनेछ । समयको गतिसँगै अगाडि बढ्न सकिने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सकिनेछ । आज गरिएको लगानी फस्टाएर जानेहुनाले व्यापारबाट मनग्गे लाभ…
शास्त्र अनुसार बिहिबारको दिन के गर्दा शुभ के गर्दा अशुभ हुन्छ ! जानी राख्नुस
May 22, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
शास्त्र अनुसार के गर्दा राम्रो के गर्दा नराम्रो भनेर जानकार रहनु बेस हुन्छ। भोलि बिहिबार के गर्दा राम्रो के गर्दा नराम्रो जानी राख्नुस। तपाइँ हामी मध्ये थोरै मात्र छौ होला कुनै पनि काम गर्दा दिन…
आजको दिनमा तपाइको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस तपाइको राशिफल
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ धर्म,सस्कृति तथा आफ्नो रितिरिवाजको जगेर्ना गर्ने काममा समय खर्चनु पर्नेछ । पढाइ लेखाइमा फड्को मार्दै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । सामाजिक काम गरि पुरस्कृत हुने योग रहेकोछ । साथिभाई तथा आफन्तहरुको…
May 21, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ लामोदुरिको व्यावसायिक यात्रा हुने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । शैक्षिक तथा धार्मिक यात्राको हुनेछ भने बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपार्ईँको नाम आउनेछ । भाग्य तथा समयले साथ दिने हुनाले सबै प्रकारका…
May 20, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ नचाहादा नचाहादा नराम्रो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ भने अप्रिय घट्नाको सामना गर्नुपर्नेछ । व्यापारमा समय दिएपनि आम्दानीन्युन हुनेहुँदा आवस्यक्ता टार्न मुस्किल पर्नेछ । पढाइमा मन नजाने तथा अरुकै पोल्टोमा नतिजा पर्नेछ । प्रेममा…
May 17, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ बिनाकारण अन्य क्षेत्रमा व्यस्त हुँदा व्यापारमा व्यावसायमा घाटा हुनेछ । सवारि साधन तथा अन्य वस्तुहरुको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला नराम्रा घट्नाहरु घट्न सक्छ । प्रेमम एकअर्कालाई अबिश्वास गर्दा मनमुटाव बढ्नेछ । पढाइ…
May 16, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ उद्योग तथा व्यापार व्यावसायमा ध्यान नदिदा घाटा सहनुपर्ला । यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला दुख पाइने छ । दाजुभाई तथा छिमेकिको साथ नपाइने हुदा मन खिन्न रहनेछ । मुद्दा मामिला तथा प्र्रतिश्पर्धामा तपार्ईँको…
May 15, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ हिम्मत गर्दा जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ। पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। पहिले दुश्मनी गर्नेहरूले पनि मित्रताका हात अघि बढाउनेछन्। अवसरवादीहरूबाट अलि सजग रहनुहोला।…
तपाइको आजको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस आज मंगलबारको राशिफल
May 14, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ रमाईलो बाताबरणमा आफन्तसँग सहभागि भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । बिवाद तथा प्रतिष्पर्धामा तपार्ईँकै जित हुनेछ भने सहयोगिको साथ पाइने हुनाले नया प्रकृतिको काम गरि मनग्गे धन तथा सम्पति आर्जन…
आज तपाइको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुस आज सोमबारको राशिफल
May 13, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ। पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। प्रतिभा प्रदर्शन गर्दै बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रयत्न गर्दा लक्ष्य…
May 12, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ बिहानको काम सन्तोषजनक नभए पनि बिस्तारै मनको डर हराउनेछ। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। पढाइमा गुरुजनको…
तपाइको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस आज शनिबारको तपाइको राशिफल
May 11, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ अवसरलाई पछ्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि परिनेछ। तत्कालको सानो फाइदा हेर्दा पछि पछुतो लाग्न सक्छ। बेसुरमा आश्वासन दिने बानीले पनि समस्या पर्नेछ। काम बिग्रने डरले…
आज सुक्रबार तपाइको दिन कस्तो छ ? हेर्नुस आजको राशिफल
May 3, 2019 , ठीकठाक रिपोर्टर	, No Comment
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ सुरुमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थअभावले सताउन सक्छ। फाइदाका लागि दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। अरूको विश्वासमा पर्दा धोका हुन सक्छ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नाले यात्रा सम्भावना…